Guddoomiye Xigeenkii Manchester United Ee Ed Woodward Oo Is casilay & Dunidii Ciyaaraha Oo Qas U Bilaabmay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaGuddoomiye Xigeenkii Manchester United Ee Ed Woodward Oo Is casilay & Dunidii Ciyaaraha Oo Qas U Bilaabmay
Guddoomiye Xigeenkii Manchester United Ee Ed Woodward Oo Is casilay & Dunidii Ciyaaraha Oo Qas U Bilaabmay
Kubadda cagta Yurub ayaa qalalaase ku dhex jirta, waxaana hadda iscasilaad ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka Manchester United ee Ed Woodward xilli ay socdaan rabshado lagaga soo horjeedo tartanka Super League iyo mudaharaadyo ay samaynayaan taageereyaashu.
Ed Woodward oo ahaa madaxa fulinta iyo guddoomiye ku-xigeenka Manchester United ayaa shaqada ka tegay xilli kooxdu qas ku dhex-jirto oo uu khilaafyo badan abuuray Super League oo ay Manchester United ka mid ahayd kooxihii aas-aasay tartanka.
Caawa oo ay kubadda cagta Yurub qasan tahay, waxa is-casilaadda Ed Woodward ay kusoo beegantay xilli ay kooxaha Manchester City iyo Chelsea ka laabteen ka mid noqoshada tartanka Super League ee ay aas-aaskooda lahaayeen.
Ed Woodward oo hore xil kalena ka hayay UEFA, shalayna iska casiilay ayaa banneeyey shaqada kaddib culays badan oo soo fuulay, kaas oo la rumaysan yahay in mulkiileyaasha ay iskaga hor yimaaddeen go’aanka jidka kusoo jira oo ay suurtogal tahay in kooxdu kaga laabato tartanka Super League si la mid ah kooxaha kale ee Chelsea iyo Manchester City.
Manchester United ayaan war rasmi ah kasoo saarin is-casilaadda Ed Woodwar, laakiin telefishanka Sky Sports iyo wargeyska Daily Mirror ayaa labaduba xaqiijiyey in uu ka tegay shaqada isla caawa oo uu is-casilaaddiisana u gudbiyey mulkiileyaasha reer Glazer.
Woodward ayaa Manchester United lasoo shaqaynayay tan iyo sannadkii 2005 isagoo waqtigaas lataliye u noqday Malcolm Glazer oo xilligaas iibsaday kooxda, waxaana uu ka dallacay xilkaas sannadkii 2012 oo uu maamuka kooxdu si buuxda gacanta ugu galay, iyadoo loo magacaabay Guddoomiye ku-xigeenka fulinta, taas oo siisay maamul dhamaystiran oo uu naadigu gacantiisa ku wada jiro.